kai - Synonyms of kai | Antonyms of kai | Definition of kai | Example of kai | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for kai
Top 30 analogous words or synonyms for kai
KAI T-50 Golden Eagle T-50 Golden Eagle (골든이글) တောင်ကိုရီးယား ၏ လေယာဉ်ပျံ အသံထက်မြန်သင်တန်းဆရာဖြစ်ပါတယ်။
KAI T-50 Golden Eagle လော့ခ်ဟိမာတင်တို့၏အကူအညီဖြင့်ကိုရီးယားလေကြောင်းအာကာသယာဉ်တည်ဆောက်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းများအားဖြင့်တီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါအစီအစဉ်အစတစ်ဦးအလင်းတိုက်ခိုက်မှုမူကွဲအဖြစ်, A-50, သို့မဟုတ် T-50 LIFT ၏ဘွားမြင်လေ၏။
KAI T-50 Golden Eagle အမေရိကန်စစ်တပ်၏ဒီလေယာဉ်ပျံကိုဝယ်ယူရန်အစီအစဉ်မရှိကြောင်း, သို့သော်အမေရိကန်စစ်ဘက်၏နာမတော်ကိုဖဲကြိုးဖြတ်အနာဂတ်၌ပဋိပက္ခများနာမည်ကိုရှောင်ကြဉ်ရန်ဤလေယာ
လီရှောင်ကီ Sun Hung Kai Properies Limited တွင် ကုမ္ပဏီမှ တရားဝင်ရာထူးမဟုတ်သော်လည်း လွတ်လပ်စွာ ဆုံးဖြတ်နိုင်သည့် ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ အနေဖြင့် ရှိသည်။ Hong Kong Ferry ( Holdings) Limited နှင့် East Asia Limited Bank ၏ အုပ်ချုပ်ရေး ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့ဝင်တယောက် ဖြစ်သည်။ ပိုစ့်မောက် ဘောလုံးအသင်းကို ဝယ်ယူရန် Peter Storrie အဖွဲ့အစည်း၏ အစိတ်အပိုင်းတခုအဖြစ် ပေါင်းစည်း ချိတ်ဆက်ထားသည်။
စန်ကာကူကျွန်းအငြင်းပွားမှု According to PRC, Kuomintang leader Chiang Kai-shek failed to protest American decisions with regard to the disposition of the islands because he depended on the US for support.
လီကာ-ရှင်း သူ၏စီးပွားရေးကျွမ်းကျင်မှုနှင့် အမြော်အမြင်ရှိမှုတို့ကို အစွဲပြု၍သူ့အား ဟောင်ကောင်တွင် “စူပါမင်း” ဟုပင်တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြသည်။ ဟောင်ကောင်နိုင်ငံရှိ သူ၏စီးပွားဖက်များမှာ Henderson Land Development မှ လီရှုကီး (Lee Shau Kee)၊ New World Development မှ ချန်ယူတန်း (Cheng Yu-tung)၊ ကာစီနိုနှင့် အိမ်ခြံမြေသူဌေး စတန်လီဟို (Stanley Ho)၊ Sun Haung Kai အိမ်ခြံမြေမှ ကွတ်(Kwok) မိသားစု နှင့် ဟင်နရီဖွတ်ရင်တန်း (Henery Fok Ying-tung) တို့ဖြစ်ကြသည်။
ထိုင်ဝမ် ထောင်ယွမ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ် ဆောက်လုပ်ရေး စီမံကိန်းကြီး ၁၀ ရပ်အား အကောင်အထည်ဖော်သည့် ကာလအတွင်း ၎င်းလေဆိပ်အား မူလက ထောင်ယွမ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်ဟု အမည်ပေးရန် စီစဉ်ခဲ့သည်။ သို့သော် လေဆိပ်မဖွင့်မှီ ၁၀ ရက်အလို ၁၉၇၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၆ ရက်နေ့တွင် ဝန်ကြီးများရုံး စည်းဝေးပွဲ၌ အာအိုစီ သမ္မတဟောင်း ချန်ကေရှိတ်（蔣介石）အား အထိန်းအမှတ်ပြုသည့်အနေဖြင့် “ချန်ကေရှိတ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်”(中正國際機場)အဖြစ် အမည်ပေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ (中正 ကျုံးကျန့်မှာ ချန်ကေရှိတ်၏ အမည်ရင်းဖြစ်သည်)' အင်္ဂလိပ်အမည်မှာမူ Chiang Kai-Shek International Airport ဖြစ်သည်။ ပြည်သူများအကြားတွင် အင်္ဂလိပ်အမည်၏ အတိုကောက် CKS အား အသုံးများကြသည်။
Power metal Power metal ဂီတာသမားများနှင့် ဘေ့စ်ဂီတာသမားများသည် note များကို လျင်မြန်စွာ တီးခတ်ကြသည်။ သို့သော် chords များမှာ harmonic tempo နှင့်အတူ နှေးသည်။ guitar solo များမှာ မြန်ဆန်ကြသည်။ chord များကို နှေးကွေးစွာ ပြောင်းလဲခြင်းသည် power metal ထဲတွင် အရေးပါသည်။ power metalသည် majar chord progressionနှင့် circle progression များကို အသုံးပြုထားသည်။ လွှမ်းမိုးသောဂီတာသမားများမှာ Kai Hansen, Gamma Rayမှ Kai Hansen, Helloween မှ Michael Weikath နှင့် Stratovarius မှ Timo Tolkki တို့ဖြစ်သည်။ တစ်ချို့ power metal တီးဝိုင်းများသည် ဘေ့စ်ပေါင်းစပ်ထားသည်မှာ rhythm ဂီတများမှ ထူးခြားသော Colorful pattern များဖြစ်သည်။ Helloween, Hibria နှင့် Symphony Xအစရှိသဖြင့်ဖြစ်သည်။ Power metal ဒရမ်သမားများသည် bass drum နှစ်ခုနှင့်အတူ double bass pattern များဖြင့် တီးခတ်ကြသည်။ double bass pedal များကို sixteenth notes များ တီးခတ်ရန်အသုံးပြုကြသည်။ beat များတွင် snare drum များကို အလေးပေးထားသည်။ ဤပုံစံကို Helloweenမှ Ingo Schwichtenberg အသုံးပြုထားသည်။ Blind Guardian နှင့် Iced Earth မှ drummer များသည် thrash metal style ၏ မြန်ဆန်သော double bass များကို တီးခတ်ထားသည်။ double kick နှင့်အတူ beat ၃ ခုမှ ၆အထိပါဝင်သည်။ Power metal တီးဝိုင်းများသည် သူတို့၏ဂီတဆိုင်ရာ arrangementများတွင် keyboard ပေါင်းထည့်ထားသည်။ တစ်ချို့ power metal တီးဝိုင်းများသည် symphonic element များကို မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ သူတို့သည် full orchestra များဖြင့် တီးခတ်ထားပြီး keyboardသမားများ
ကော့ခ်မိသားစု ဟောင်ကောင်တွင် ဖြစ်ခဲ့သော ပုဂ္ဂလိ ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာ ဈေးနှုန်းများ ထိုးကျသွားချိန် မတိုင်မီတွင် အိမ်ယာခြံမြေလုပ်ငန်းများ၏ ဈေးကွက် ဝရုန်းသုန်းကား ပျက်သွားခဲ့သည်။ ထိုသို့ ပြောစမှတ်ပြု ဝရုန်းသုန်းကား ဈေးကွက် ပျက်သွားသော လုပ်ငန်းမိသားစုများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့သည့် မေ လတွင် အငယ်နှစ်ယောက်ဖြစ်သည့် Thomas နှင့် Raymond တို့၏ သဘောထားကွဲလွဲမှုများ အပြီးတွင် အကြီးဆုံး အကိုဖြစ်သူ Walter မှာ ၁၈နှစ်ကြာ လုပ်ခဲ့သော Sun Hung Kai လုပ်ငန်းစု၏ ဥက္ကဋ္ဌ ရာထူးမှပြုတ်သွားခဲ့ သည်။ မိခင်ဖြစ်သူ Kwong Siu-hing က ဥက်ကဌ ရာထူးကို လွှဲပြောင်းရယူခဲ့သည်။ ဇန်နဝါရီလတွင် ဟောင်ကောင်၌ “W” ဟိုတယ်ကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ကော့ခ် မိသားစု သည် ဆက်သွယ်ရေးနှင့် နည်းပညာ လုပ်ငန်းများဖြစ်သော SmarTone-Vodafone နှင့် စီးတီး ဘက်စ်ကား ကုမ္ပဏီ တစ်ခုဖြစ်သော KMB တို့၌လည်း ရင်းနှီးမြုပ်နှံဖို့ စိတ်ဝင်စားမှု ရှိကြသည်။
ချန်ဆားမြို့ Till May 1927, communist support remained strong in Changsha before the massacre carried out by the right-wing faction of the KMT troops owing allegiance to Chiang Kai-shek in its offensive against the left-wing faction of Wang Jingwei then allied closely with the communists. The purge of communists and suspected communists was part of Chiang's plans to consolidate his hold over the KMT weakening Wang's control, and thereby over entire China eventually. Inaperiod of twenty days, Chiang's forces killed more than ten thousand people in Changsha and its outskirts.